China Iphone6s Plus Magcase 100 I Aramid Fiber China Manufacturers & Suppliers & Factory
Iphone6s Plus Magcase 100 I Aramid Fiber - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Iphone6s Plus Magcase 100 I Aramid Fiber)
Apple iPhone 6Plus High Capacity Li-ion ibhetri 3410mAh Ukwamukela umkhiqizo we-OEM kumakhasimende, iBhetri ye-iPhone Capacity 6Plus ephezulu (A1522, A1524, A1593). Akuyona ye-6, 6S noma i-SPlus engu-6. I-CAPACITY EPHAKATHI: I-iPhone Capacity High 6Plus 3410mAh. Wonke ama-iPhone 6Plus Battery Replacement Replacement...
Apple iPhone 7 Plus Cover Emuva Cover Assembly Housing Replacement Wonke ama-housings afaka i-logo logo ye-Apple nezinye izithonjana ze-OEM. Konke kufana ne-OEM Housings eze nezinkinobho kanye ne-SIM card tray. Lezi azikho ama-OEM housings. Lezi yizona zokuhlala ezitholakalayo ezitholakala emakethe yomphakathi....
I-iPhone 6S Plus Ukubuyiswa Kwesikhwama Sezindlu Zesizinda Sokubuyiselwa Kokubuya
I-COPY IZINDLELA EZINYE IZINKHUMA ZESIKHATHI - Apple iPhone 6S Plus Isembozo Ezezindlu LoMhlangano R eplacement Ingxenye ephelele yokufaka esikhundleni sezindlu eziqhekekile noma eziqothuliwe ngemuva kwe-iPhone 6S Plus yakho. Indlu kuphela, izingxenye ezincane azifakiwe. Ikhono lokukhanda lobuchwepheshe liyadingeka...
Ukupakisha: I-iPhone 8 Plus i-LCD Touch Digitizer
I-iPhone 8 Plus (5.5 amasentimitha) - Thinta i-LCD Touch Touch Digitizer Ukubuyisa I-Glass Iyahambisana ne-iPhone 8 Plus 5.5 intshi kuphela, ayihambisani nezinye imodeli . I-iPhone 8 Plus 5.5 intshi ye-LCD Screen + I-Touch Digitizer Panel Isungulwe. Faka futhi ulungise isikrini esiphelele: izinkinga zokubonisa,...
I Ifoni 7 I-Plu s 5.5 intshi I-LCD Digitizer Ukushintsha esikhundleni se-3D Touch Screen Iyahambisana ne-iPhone 7 Plus 5.5 intshi kuphela, ayihambisani nezinye imodeli . I-iPhone 7 Plus 5.5 intshi ye-LCD Screen + I-Touch Digitizer Panel Isungulwe. Faka futhi ulungise isikrini esiphelele: izinkinga zokubonisa,...
I-iPhone 6S Plus i-LCD Screen Replacement White, i-Digitizer Bonisa i-Retina 3D Touch Screen Glass Glass Assembly ye-iPhone 6S Plus. Lokhu kukhishwa kwesikrini KUPHELA kufanelana ne-iPhone 6S Plus A1634 / A1687 / A1699, 5.5 intshi, hhayi i-iPhone 6 plus, i-iPhone 6s. Sicela uqinisekise imodeli yakho ngaphambi...
I-iPhone 6 Plus Retina i-LCD Touch Screen Digitizer
I-iPhone 6 Plus 5.5 Inch Retina I-LCD Screen Touch I-Digitizer I-Glass Replacement ngaphandle Kwenkinobho Yasekhaya Iyahambisana ne iphone 6 plus 5.5 intshi, AKUKHO iphone 6 noma iphone 6s plus 5.5 intshi I-iPhone 6 kanye no-5.5 intshi LCD Screen + I-Touch Digitizer Panel Press ihlangene. Faka futhi ulungise isikrini...
Iphone6s Plus Magcase 100 I Aramid Fiber IPhone6S Plus Magcase 100% i-Aramid Fiber iPhone6S Plus Magcase 100% i-Aramid Fiber IPhone 6Plus PITAKA Magcase i-Aramid Fiber iPhone6S PITAKA Magcase Aramid Fiber I-iPhone 6Plus i-PITAKA Magcase i-Aramid Fiber IPhone6SI-PITAKA Magcase i-Aramid Fiber IPhone6S Plus Magcase